मधुपर्क २०६६ जेठ	मसली भाउजू राममणि पोखरेल असार महिनाको पन्ध्र गते हाम्रो नेपाली समाजमा दही-चिउरा खाने परम्परा छ । आ�नो घरमा दुहुना गाई/भैसी नहुनेले पनि किनेर, खोजेर, मागेर ल्याएर पनि खाने चाड मान्ने चलन छ । सबैका घरमा धेरथोर दही-चिउरा तयार हुन्छ । यस वर्षको मनसुन ढिलो प्रारम्भ भएको कारण पानी परेको छैन । सिचाइको अभावमा जमिन मुख बाएर बसेका छन् । अधिकांश आकाशे खेत बाझो पल्टेका छन् । थोरै कुलो लाग्ने खेतको पनि रोपाइ थालनी भएको छैन । राकसे बूढाको धेरैजसो खेत पानी पट्ने हुनाले खेतको काम भ्याइनभ्याइ छ । गाउमा राकसे बूढा आफैा पनि खेतमा दिन बिताउाछन् । हली, गोरु बिहानै खेतमा पुग्दछन् । आफू र जन-वन झण्डै बराबरी लगाउाछन् ।
नाङ्लामा केलाउादै गरेको चामल भान्साकोठामा राखेर जेठीमैया सारी सुर्कदै आागनमा आइन् । ठूलो स्वरले "कुन रााडीले गाईलाई टुनामुना गरिदियो भनेर कराउन लागिन् । कुन रााडीका आाखा र छौडा लागे भन्दै आागनमा चक्कर काटिन् । बूढीका आाखा राता भए । चाडबाडका दिन अनेकथरिका रााडहरूलाई यहीा गाड्न मुन्ट्याउाछन् । ए नरमान जा धामी बोलाउन, पुछारघरे साहिला घरमा आइपुग्या होला, बोक्सी रााडीहरूको करामत हो । ब्याएको तीन महिना भएको छ ।" जेठीमैयााको आाखा गाईको थलामा घुम्न सकेन । गाईको थलामा घाास छ, छैन । चरणबाट आउादा गाईले पेट उकासो, उकासेन । दिउासो खोले पनि पायो पाएन आदिबारे जेठीमैयााको सोच पुगेन ।
"बाबु खेतबाट दिनभरिको कामले लखतरान भएर खेतालाका साथ आउादै हुनुहुन्छ ।"
"कमसेकम तपाईंले बुझेको, तपाईंलाई मर्का परेको झ्याउला पन्साउन परेको दिकदारी चोट हाम्रा सामु राम्रो तरिकाले बुझाएर भने पो न्याय, अन्याय र मर्का कस्तो पथ्र्यो बुझ्न पाए पो बोल्नु त", सञ्जयले आमालाई कडा शब्द भावभङ्गी मिलाएर आागनको कुर्सीमा बस्तै व्यक्त गर्‍यो ।
गाई सबेरै बााधेको, खोलेपानी पनि दिन भ्याएको थिएन । खेतको चटारोले सबको ध्यान खेततिर केन्दि्रत भएको छ । शोभाले घोसेमुन्टो लगाएर डराई डराई भनी । सञ्जयले बोल्न नपाउादै बूढी सबका सामु कुर्लिन् । मसली आएकी थिई, थोरै बात चुटेर गई । रााडीका मुखका दाात झरेका छन् । अनुहार हेर्दै बोक्सीजस्ती लाग्छे । पोतो बसेको अनुहार छ । लेघ्रो तानेर चिप्लाई घसेर बोलेर गाड्छन् । काकीको त गाई दूध दिादै छ, थाकेको छैन । मेरो भैासी त थाक्यो, साटोपाटोको चााजोपााजो मिलाउन भनेको भनेर लेघ्रो तान्थी । निकै समय थचारिई । काम न काजकी बजिनीलाई पिाधमा फोका उठुञ्जेल बसे पनि के बित्ने लवस्तरीको । के तन्तर मन्तर गरेर गई, गाईले टाङमुनि बस्न दिएन । नरमानलाई नै पल्टाई दियो । तिमीहरूलाई भाग बस्न पाए भई हाल्ने, पुर्‍याउनु टार्नुसाग कुनै सरोकार छैन । छोराबुहारी र छोरीको सामु भुत्भुताएपछि बूढीको रिस आधा घट्यो । एकपल्ट आाखा फर्काएर पूर्वी आकाश हेरेर मौन भइन् । शोभा केही नबोली भान्सामा प्रवेश गरिन् । पेटभरि घाास खान दिउा दूध, देला नि । गाईवस्तु यदाकदा यस्तो भइहाल्छ नि । आमाको बानी पनि ठीक छैन क्या । बढी अर्कालाई आरोप र दोष लगाउनुहुन्छ पार्वतीले आ�नो मनको कुरा गरी ।
केही क्षणको मौनतापछि सञ्जयले आ�ना कुरा फेरि भन्न थाल्यो बिचरी मसली भाउजूले भैासीको दूध बेचेर छोरी पढाएकी छन् । देवरले विदेशबाट पैसा पठाइदिन थाल्या छ । सुखका दिन आए भनेर खुसी छन् । नागरिकता बनाइदिन अधिकार पाए महिलाले छोराछोरीको नागरिकता बनाउन अब देवर-जेठाजुको शरण पर्न परेन गाईले दूध नदिनुको कारण त पेटभरि खोले-घाास खान नपाएर पो त हो त । बुढेसकालमा सम्मान खोज्नेकी अपमान । तपाईंले व्यक्त गरेका शब्दहरू र शब्दवाण मसली भाउजूले थाहा पाइन् भने के हुन्छ ? जीवनको नियति यस्तै कठोर हुन्छ कि नरम ?
पार्वती र शोभा केही बोलेनन् । नरमान गाईलाई खोले दिन थाल्यो । सञ्जयले घरमा भएका सबैले सुन्ने गरी पुनः आ�नो भनाइ राख्ने प्रयत्न गर्‍यो ।
विगतको युग नै त्यस्तै थियो, मान्छेले आ�नो शक्ति चिन्न-बुझ्न सकेका थिएनन्, अाध्यारो युगमा निरीह भएर बााचेका थिए, एक्लो जीवन बिताएका थिए । भौतिक प्रगति भएको थिएन । अाध्यारो युगले दिएको गलत संस्कृति र अन्धविश्वास हो । बोक्सीका कुरा अब गर्दै हिाड्नु अपराध हुन्छ । अब हामी नयाा युगमा प्रवेश गरेका छौा । भोलि उमेर, सम्पत्ति र छोराको धाक नदेखाई मसली भाउजूसाग यी आज व्यक्त गरेका बकवास र आरोप अब आइन्दा कसैलाई लगाउने छैन भनेर माफी माग्नुपर्छ भन्दै सञ्जयले आमालाई सम्झायो ।
सञ्जयका घरमा भएका कुरा थाहा पाएर हो या नपाई हो, मसली भाउजू बिहान सबेरै त्यस घरमा आइन् । राकसे बूढाका घरपरिवार सब चुपचाप भए । मसलीले जेठीमैयाालाई नमस्कार गर्दै आागनको कुर्सी तानेर बसिन् । केही क्षण सब मौन रहे । मसलीसाग बोल्ने आाट गरेनन् । केही क्षणको मौनतापछि मसली आफैाले भनिन्- "काकी तपाईंलाई देख्दा आमा देखेजस्तै लाग्दथ्यो र आदर गर्दथेा । कसैको नम्रता, श्रद्धा र आदर्शलाई कमजोरी ठानेर दशथरिका आरोप लगाउन कति निन्दनीय छ" भन्दै बसेको ठाउाबाट उठेर बाटो लागिन् । कसैले पनि उनलाई बस भन्न सकेनन् र विषय र प्रयोजन पनि कोट्याउन चाहेनन् । � -उदयपुर, गाईघाट अन्य शीर्षक ► मेरो उही भुत्ते गिदी -बालकृष्ण पोखरेल ► अध्ययन र समर्पण -कुलचन्द्र वाग्ले ► साहित्यिक पत्रकारिताको कष्टकर यात्रा -विजय चालिसे ► गयो वर्ष - आयो वर्ष -मेदिनीकुमार केवल ► मलामी -पद्मा अर्याल ► पुस्ता अपभ्रंश र संस्कृति -बालमुकुन्द कार्की ► अधिकारको परिभाषा -युवनाथ लम्साल ► देशभित्र सिमाना खोज्दै -अच्युत घिमिरे ► आमाको पुकार -कृष्णप्रसाद भण्डरी ► आमाको जतन -डम्बर रसिक भारती ► आँकुरा ► पुस्ता अपभ्रंश र संस्कृति -बालमुकुन्द कार्की ► अधिकारको परिभाषा -युवनाथ लम्साल ► आमाको पुकार -कृष्णप्रसाद भण्डरी ► ए सप्तकोशी ! -दिलीप राई सगर ► आमाको जतन -डम्बर रसिक भारती ► केही हाइकु -ज्ञान उदास ► अक्षर -प्रल्हाद पोखरेल ► गजल -सुवासचन्द्र ढुङ्गेल ► कविता -तानिकावा शुन्तारो ► गजल -काशीराम विरस ► मन परेको राम्रो -केदार न्यौपाने ► गजल -दिव्य गिरी ► नेता नबन्ने म ता -पर्शुराम पराजुली 'पराशर' ► स्मृति क्यानभासमा हजुरआमा -लक्ष्मी उप्रेती ► जीवित नायकको आत्मकथा -शैलेन्द्र साकार ► पहाड र आकाश -मञ्जुल ► सहिदको सम्झना -ज्ञाननिष्ठ ज्ञवाली ► झुमी -चंकी श्रेष्ठ ► कालीका सुसेली -बाबुराम लामिछाने ► स्मृतिमा इश्वरदाइ -गीता त्रिपाठी ► नगदेश बुद्धविहारदेखि रम्मापुरसम्म -कृष्णकुमार प्रजापति ► स्कटल्याण्डतिरका पदचाप -मुकुन्द पोखरेल ► को हुन् चार जना ? -धु्रव थापा ► भारतमा नेपाली नाटक -देवी पन्थी ► नेपालको मैथिली भाषा-साहित्यमा नाटकको विकास डा. गङ्गाप्रसाद अकेला ► अमेरिकाको रहर -डा. हंसपुरे सुवेदी ► पट्यारिंदो ओछ्यानमा अन्तस्करणका कुरा -नरेन्द्रजंग पिटर ► खुट्टाभरिका हिँडाइ र हिँडाइभरिका खुट्टाहरू -तेजेश्वरबाबु ग्वंग ► लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा स्रष्टा, गणतान्त्रिक चेतना र नेपाली साहित्य -मधुसूदन पन्थी ► शैशवका तीन पुस्ता -मदनमणि दीक्षित ► नेपाली साहित्यमा 'मधुपर्क'को योगदानको मूल्याङ्कन -शिव रेग्मी ► हाम्रो प्रतिबद्धता ► मधुपर्क २०६६ जेठ Archives | Contact Details | Feedback | Home Gorkhapatra Sansthan - Dharmapath, Kathmandu, Nepal - Tel: 0977-1-4244437